Fihenam-bidy ho an'ny mpianatra (Tidal Student Discount) (2020) - Zahao ny fenitra azo ekena - Tolotra
Misy vaovao tsara ho an'ireo mpianatra izay tia mandefa mozika amin'ny app Tidal. Ankehitriny dia tsy mila mandoa ny famandrihana iray volana izy ireo hilalao ny mozika ankafiziny sy hihaino ny mozikan'izy ireo. Satria izao, mpianatra dia afaka mandefa ny app Tidal miaraka amin'ny fihenam-bidy 50% isan-jato.
Mpianatra amin'ny oniversite dia afaka misafidy ny fampiharana premium Tidal amin'ny taha mihena. Noho izany, raha mpianatra ianao, dia miarahaba anao, tsy mila mandoa $ 4,99 isam-bolana fotsiny ianao, ary ho an'ny TidalHiFi dia mila mandoa $ 9.99 isam-bolana ianao.
Afaka miditra amin'ny hira 57 tapitrisa mahery ianao ary horonantsary maherin'ny 2.30.000 amin'ny Internet amin'ireo vidiny fihenam-bidy ireo.
Iza no azo ekena amin'ny fihenam-bidy ho an'ny mpianatra?
Mpianatra maro no mitady Discount Student Tidal ary manatrika ny Lohateny IV hijerena ireo oniversite afaka miatrika fihenam-bidy Tidal. Mitovy amin'ireo tranonkala streaming mozika hafa, i Tidal dia mampiasa SheerID ihany koa hanamarinana ireo mpianatra.
Ireo oniversite sy oniversite nahazo fankatoavana dia azo ekena amin'ny fihenan'ny mpianatra Tidal. Ankoatr'izay dia mila 18 taona ny mpianatra.
Ahoana ny fisoratana anarana amin'ny fihenam-bidy ho an'ny mpianatra?
Raha azonao ekena ny fihenam-bidy ho an'ny mpianatra Tidal, afaka mandroso amin'ny fizotran'ny fisoratana anarana ianao ary mahazo ny serivisy mivantana amin'ny mozika. Raha hisoratra anarana dia mila manaraka ireto dingana tsotra ireto ianao.
Voalohany, tsidiho ny tidal.com ary midira amin'ny alàlan'ny fidirana amin'ny id mailaka, kaonty Facebook, ary kaonty Twitter.
Raha vao miditra ao amin'ny kaonty ianao dia afaka misafidy ny kaonty tianao hiaina ireo serivisy — ohatra, drafitry ny fianakaviana, drafitra mahazatra ary drafitra hafa mifototra amin'ny safidinao.
Rehefa avy nisoratra anarana ianao dia safidio ny safidin'ny mpianatra ary fenoy ny fizotry ny fisoratana anarana. Ampidiro ny fampahalalana momba ny fandoavam-bola ary safidio ny drafitra fihenam-bidy ho an'ny mpianatra na ny drafitra Tidal HIFI hanana kalitao feo avo kokoa.
Dingana fanamarinana amin'ny maha mpianatra anao hahitana fihenam-bidy ho an'ny mpianatra:
Raha vantany vao vita ny fizotran'ny fanaovan-tsonia amin'ny maha-mpianatra anao, aorian'izany dia tsy maintsy manome ny antsipiriany tena ilaina ianao ary manaporofo fa mpianatra ianao. Tidal dia mampiasa SheerID hanamarinana ilay mpianatra. Ny takelaka dia misy pejy roa izay misy antsipiriany vitsivitsy momba ny fizotran'ny fanamarinana.
Fenoy ny pejy takiana fihenam-bidy ho an'ny mpianatra Tidal ary tohizo ny gazety.
Aorian'izany dia mila manome antontan-taratasy amin'ny anjerimanontolo ianao, ao anatin'izany ny anarana voalohany, ny anarana farany, ny fandaharam-pianarana, ny sora-tanana, ny karapanondronao. Mety mila manome antontan-taratasy hafa ianao, raha ilaina izany.
Avy eo, safidio ny safidy Upload ary avy eo mitete ny antontan-taratasy ilainao hanamarinana ny satan'ny mpianatra.
Vantany vao nampakatra ny antontan-taratasy rehetra ianao ary nanery ny safidy manaraka, aorian'izany, halefa amin'ny mailakao ny fanamafisana. Mety mila ora vitsivitsy hatramin'ny roa andro ny fanamarinana ary manararaotra ny fihenan'ny mpianatra.
Raha vantany vao azonao ny Discount Tidal Student, dia hahazo ny fitsapana maimaimpoana mandritra ny 30 andro miaraka amin'ny famandrihana handefasana mozika sy seho tianao indrindra ianao. Tsy toy ireo tranokala streaming hafa izay mila hamarininao indray ny kaonty isan-taona mandritra ny efa-taona, eto dia tsy mila manamarina indray ianao ary mankafy mivezivezy mozika maimaim-poana amin'ny taha misy fihenam-bidy.
Raha resaka serivisy fitaterana mozika dia iray amin'ireo tsara indrindra i Tidal. Fantatra amin'ny ankamaroany noho ny feo avo lenta. Raha mpianatra ianao ary vonona ny hahazo ny fihenam-bidy ho an'ny Mpianatra Tidal dia araho ny dingana voalaza etsy ambony ary manomboka mametaka ny mozika tianao eny an-dalana.
ny fomba hijerena hafatra mivantana amin'ny instagram amin'ny pc
rahona famoronana adobe ho an'ny mpianatra
tranonkala tsara indrindra hijerena andian-dahatsoratra maimaimpoana
mikapoka fanaovana programa ho an'ny mac
tranokala hilalao lalao an-tserasera
tranokala sarimihetsika maimaim-poana tsara tsy misoratra anarana
mijery sarimihetsika fahitalavitra maimaim-poana amin'ny Internet